Root Estradiol Enanthate budada (4956-37-0) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Gowrado Dumar ah / Taxanaha Estradiol / Estradiol Baro budada
SKU: 4956-37-0. Categories: Taxanaha Estradiol, Gowrado Dumar ah
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud ee Estradiol Enanthate budada (4956-37-0), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Estradiol Enanthate budada waa hormoon haween ah oo hormoon ah. Waxay u shaqeysaa adoo beddelaya estrogens dabiiciga ah ee haweeynaya oo aan soo saari karin estrogen ku filan. Cagaarka caanuhu wuxuu bixiyaa nadiif ah 99% Estradiol Enanthate budada (CAS 4956-37-0) si loogu beddelo estrogens dabiiciga ah haweenta ama kor u qaadida heerka hormoonka haweenka.
Estradiol Enanthate video budada
Raw Estradiol Calaamadee Calaamadaha asaasiga ah ee budada
Formula kelli: C25H36O3
Miisaankani waa: 384.55
Dhibcaha Biyaha: 94-96 ° C
Raw Estradiol Enanthate isticmaalka budada ee wareegga steroids
Estradiol Enanthate budada (CAS 4956-37-0) (ama INN, USAN), ama estradiol heptanoate, waa aaladda synthetic, steroidal estrogen iyo ester hormoon.
Raw Estradiol Enanthate Isticmaalka budada
Isticmaal estradiol enanthate sida uu takhtarku ku faray. Calaamadee calaamada daawada si aad u hesho tilmaamo sax ah. Calaamadee calaamada daawada si aad u hesho tilmaamo sax ah.
Digniinta Root Estradiol Enanthate budada
Waa inaadan u isticmaalin estradiol-da haddii aad qabto: cudur beerka ah, jirro dhiigbax, dhiig-bax aan caadi ahayn, taariikhda kansarka hormoon-ku-tiirsan (sida naaska, uterine, umuliso, ama kansarka thyroid), ama haddii aad waligaa wadnaha weerarka, istaroogga, ama xinjir dhiig.
Estrogens ayaa lagu soo warramey inay kordhinayaan fursada ilmagaleenka (endometrial) kansarka haweenka ku jiray menopause, gaar ahaan haweenka qaata daaweynta hoormoonka estrogen-keliya. Estrogens sidoo kale waxay kordhin kartaa halista kansarka ugxan ama naaska. Cudurka loo yaqaan 'estrogen-containing' waa inaan loo isticmaalin si looga hortago cudurka wadnaha. Cudurka loo yaqaan 'progestin' ee loo yaqaan 'progestin' oo loogu talagalay daaweynta dabiiciga ah ayaa si fudud u dhalisa cudurada wadnaha (sida wadnaha wadnaha), stroke, xinjir dhiig oo culus ee lugaha ama sambabada (pulmonary embolism / trombosis deep), waallida, iyo kansarka naasaha. Halistaas waxay u muuqaneysaa inay ku xiran tahay dhererka wakhtiga loo yaqaan estradiol cypionate loo isticmaalo iyo xaddiga qiyaasta estrogen kasta. Sidaa daraadeed, borotiinka estradiol waa in loo isticmaalaa muddada ugu dheer ee suurogalka ah ee qiyaasta ugu hooseysa si aad u hesho faa'iidooyinka iyo yareyso fursadda saameynaha halista ah ee daaweynta muddada-dheer.
Raw Estradiol Enanthate Suuq-geynta Shirkadda
Sida loo iibsado Estradiol Enanthate budada (CAS 4956-37-0) laga bilaabo AASraw
Cagaarka AAS wuxuu bixiyaa nadiif ah 99% Estradiol Enanthate budada ceyriinka ah si aad u beddesho estrogens dabiiciga ah ee haween ah.
Estradiol Enanthate Rootiinka Rootiga ah
Medroxyprogesterone acetate budada